स्वत: एप्पल संगीत नविकरण बन्द गर्नुहोस् आईफोन समाचार
एप्पल संगीतको स्वचालित नवीकरण निष्क्रिय गर्नुहोस् र एक डराउँनुहोस्
एप्पल संगीत पहिले नै १०० भन्दा बढी देशहरूमा प्ले भइरहेको छ र हामी मध्ये धेरैले-महिना पूर्ण सेवा परीक्षणको आनन्द लिइरहेका छौं। सत्य यो हो कि यो धेरै राम्रो छ तर, यदि तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ भने, कम्तिमा अहिलेको लागि, यो तपाईंलाई राम्रो विचार जस्तो नलाग्न सक्छ कि तीन महिना भित्रमा तपाईं आफ्नो कार्डमा € 9.99। .XNUMX देख्नुहुनेछ तपाईंको एप्पल आईडीको साथ सम्बन्धित। यो असभ्य संगीत उपभोक्ताहरूमा लागू हुँदैन जुन उनीहरू सेवाको लागि भुक्तान गर्न पक्का छन्, विकल्प सक्रिय भए पछि उनीहरूलाई सजिलो हुनेछ।
अहिले, यो मलाई राम्रो विचार लाग्दैन र मलाई लाग्छ यो उत्तम छ यदि हामी स्वचालित नवीकरण बन्द गर्‍यौं। मलाई लाग्छ तीन महिनामा प्रक्रियालाई उल्टाउने समय आउँनेछ यदि हामी चाहन्छौं भने। यदि होईन भने, हामी आश्वस्त हुन सक्छौं कि उनीहरूले हामीलाई कहिल्यै चार्ज गर्दैनन्। यस लेखमा स्विच कहाँ छ हामी तपाईलाई देखाउनेछौं जुन तपाईले यी लाइनहरूमा माथि छविमा देख्नुहुनेछ।
स्वत: नवीकरण असक्षम पार्न विकल्प थोरै लुकाइएको छ। मलाई लाग्छ एप्पलले यसलाई धेरै पहुँचयोग्य बनाउनुपर्दछ, तर मँ बुझ्छु कि जीवनमा सबै चीज व्यवसाय हो। यसको मतलब यो होइन कि एप्पलले हामीबाट यो विकल्प लुकाएर केही गल्ती गरेको छ जस्तो देखिन्छ, यद्यपि यो धेरै लुकाइएको छैन। यसलाई निस्क्रिय गर्न, हामीले निम्न गर्नुपर्नेछ।
स्वचालित एप्पल संगीत नविकरण कसरी बन्द गर्ने
हामी हेड आइकनमा ट्याप गर्दछौं।
हामी दृश्य एप्पल आईडीमा ट्याप गर्दछौं।
SUBSCRIPTIONS मा, हामी प्रबन्ध मा टच गर्दछौं।
हामी स्विच निष्क्रिय गर्नुहोस्।
पुन: सदस्यता लिनको लागि, हामी दुई संस्करणको मूल्यहरु मध्ये एउटामा टच गर्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » एप्पल संगीतको स्वचालित नवीकरण निष्क्रिय गर्नुहोस् र एक डराउँनुहोस्
ठिक छ, जब म एप्पल संगीत राख्छु एक पोस्टर मिल्यो र मैले भनें धन्यवाद, के यो सदस्यता रद्द गर्दछ?
अल्फोन्सो जेभेन क्रुस्पे भन्यो
के तपाइँले--महिना सदस्यता को लागी भुक्तान गर्नु पर्छ?
Alfonso Zven Kruspe लाई जवाफ दिनुहोस्
भेरोनिका ximena भन्यो
Months महिना नि: शुल्क छन् .. त्यस्तै प्रकारले, यसले तपाईंलाई सदस्यता लिन बनाउँदछ कि जब months महिना भन्दा बढि छ, म तपाईंलाई अर्को महिना चार्ज गर्नेछु। तर यदि तपाईंले यहाँ जे भन्छ यो गर्नुहोस्, यसले तपाईंलाई शुल्क लिने छैन जब सम्म तपाईं तिर्नु
Veronica Ximena लाई जवाफ दिनुहोस्
तर अझै मैले क्रेडिट कार्डको डाटा राख्नु पर्छ?
हो, कार्डको विकल्पको सट्टा विकल्प «कुनै पनि होइन 'राख्ने प्रयास गर्नुहोस् र यो बन्द हुँदैन, त्यसैले मैले कार्ड डाटा राख्नुपर्‍यो र months महिना सक्रिय छन्, यसैले स्वत: नवीकरण निष्क्रिय गर्नु महत्वपूर्ण छ, त्यसैले त्यो समाप्त भए पछि free निःशुल्क महीनाहरूले तपाईलाई महिना for को लागी चार्ज गर्दैनन्।
मानुएल लिनियर्स प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
एक itunes कार्ड किन्नुहोस् र मैले यो यो गरे
म्यानुएल लिनरेसलाई जवाफ दिनुहोस्
हो तिमि सक्छौ?
एन्जेल एडुआर्डो मिरांडा मेरिडा भन्यो
यदि तपाइँसँग छ, र त्यो मलाई shits 🙁
एन्जेल एडुआर्डो मिरांडा मेरिडालाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो हो: /
उत्कृष्ट, धन्यवाद पाब्लो!
डेभिड इस्माइल रड्रिग्ज भन्यो
डेभिड इस्माइल रोड्रिग्जलाई जवाफ दिनुहोस्
जोस मिरन्डा भन्यो
जोस मिरांडालाई जवाफ दिनुहोस्
iTunes १२.२ केही समय पहिले उपलब्ध पनि छ। केहि नयाँ भयो जुन मसँग भयो, म आईट्यून्समा संगीत सुन्दै थिए, र आईफोनमा मैले सुन्न रेडियो खोलें र म्याकमा मैले यसो भनिरहेको एउटा झ्याल प्राप्त भयो कि यदि अर्को उपकरणमा म्यूजिक प्ले भइरहेको छ भने। जारी राख्नुहोस् कि हुँदैन।
पल बेलन विल्चेस भन्यो
के कसैलाई थाहा छ किन उनीहरुले परिवार योजनाको लागि for $.$? चार्ज गर्छन्? कुनै पदोन्नति वा केहि? हाहा
पल बेलन विल्चेसलाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरू लि apple्कको साथ ईमेल पठाउँछन् स्वचालित नवीकरणलाई निलम्बन गर्न सक्दो चाँडो नै तिनीहरूले स apple्गीतको नि: शुल्क परीक्षण स्वीकार गर्दछन्
यदि तपाईंसँग एप्पलमा प्रमाणित भुक्तान विधि छैन भने, स्पष्ट रूपमा तिनीहरूले केहि शुल्क लिने छैनन् न त उनीहरूले केहि चार्ज गर्नेछन् !!! मसँग स्वचालित नवीकरणको विकल्प छैन किनकि मसँग भुक्तान विधि छैन !!! त्यसोभए जो मेरो केसमा छन् उनीहरूले चिन्ता लिनुपर्दैन!
Anonymous90 लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ यो शुल्क हो कि एप्पलले खाता प्रमाणीकरण गर्न लगाउँछ र त्यसपछि यो तपाईंलाई days दिनमा फर्काउँछ वा त्यस्तै केही।
अलेजेन्ड्रो लेरेना भन्यो
यो दक्षिण अमेरिकाको लागि मूल्य हो, किनकि स्पोटाइफको दक्षिण अमेरिकाको लागि कम मूल्य पनि छ।
अलेजेन्ड्रो Llerena लाई जवाफ दिनुहोस्
आरोन अबेंसुर भन्यो
तर के यो अझै समान क्याटलग हो?
हारून अबेंसुरलाई जवाफ दिनुहोस्
रिगोसी रिकार्डो गोन्जालेज सिल्भा भन्यो
रिगोसी रिकार्डो गोन्जालेज सिल्भालाई जवाफ दिनुहोस्
फ्रान्सिस्को जोस म्याटस पाल्मा भन्यो
यसको लागि तपाईंसँग अनुप्रयोग हुनुपर्दछ, संगीत स्थापना गर्नुहोस् वा तपाईंलाई ITunes बाट आईटी डिभ्याक्ट गर्न लाग्नु भएको छ यो कसरी भइरहेको छ?
फ्रान्सिस्को जोस म्याटस पाल्मालाई जवाफ दिनुहोस्
हो, क्याटलग व्यावहारिक रूपमा उही हो, कहिलेकाँही पूर्व-अर्डरहरू दक्षिण अमेरिकामा पहिले नै आउँछन्
के यो नि: शुल्क अवधि हिजो सुरू भयो वा कहिले तपाइँ यसलाई सक्रिय गर्नुहोस्?
म .8.3..XNUMX मा छु र म संगीत अनुप्रयोगको लागि मात्र अपलोड गर्न चाहन्न।
यदि यो हिजो देखि नि: शुल्क छ भने अपलोड गर्न खोल्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्।
एरोयाओ लाई जवाफ दिनुहोस्
एलेना मलागोन पिकन भन्यो
मैले कहाँ असक्षम पार्न सक्दिन?
एलेना मालागोन पिकनलाई जवाफ दिनुहोस्
येशू ब्रायन Calderòn फर्नांडीज भन्यो
मँ मैले केहि पनि पाउँदिन जब उनीहरूले मलाई कार्डमा राख्न भन्यो मैले कुनै पनि हालेको छैन किनकि मसँग अहिलेसम्म राम्रो छैन खराब छ ???
जेसिस ब्रायन काल्डेरन फर्नाडीजलाई जवाफ दिनुहोस्
परी लुइस भन्यो
उनीहरूले यहाँ वर्णन गरेको कुरा बाहिर आउँदैन
एन्जेल लुइस लाई जवाफ दिनुहोस्
यो निष्क्रिय छ रूपमा। कसैलाई थाहा छ
सान्द्रा रोड्रिग्ज बुर्गोस भन्यो
धेरै धेरै धन्यवाद! यो जानकारी मलाई कत्ति राम्रो लाग्यो 😀
Sandra Rodriguez Burgos लाई जवाफ दिनुहोस्
के आईट्यून्स कार्डको साथ भुक्तान पनि मान्य छ?
URGE: एप्पल संगीत सदस्यता संग, म संगीत पहिले नै मेरो iTunes लाइब्रेरी मा थियो कि सिंक जारी गर्न सक्षम हुनेछ?
डेभिड मोरा भन्यो
मैले मेरी छोरीको लागि सदस्यता लिएँ र तिनीहरूले मलाई क्रेडिट कार्डमा शुल्क लगाए, के तपाईंले उनीहरूले किन चार्ज गर्नुभयो र मलाई त्यो फिर्ता फिर्ता अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा बुझ्न मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद।
डेभिड मोरालाई जवाफ दिनुहोस्
मैले सक्रियता गरें र म मेरो क्रेडिट कार्डमा १००.११ चार्ज गर्छु, किन? साथै, उसले मलाई months महिना नि: शुल्क दिएन!
नाओमीलाई जवाफ दिनुहोस्
iTunes संस्करण १२.२ मा अद्यावधिक गरिएको छ र एप्पल संगीतको साथ एकीकरण समावेश गर्दछ
TaiG ले आईओएस .8.4..XNUMX सँग मिल्दो आफ्नो जेलब्रेकको नयाँ संस्करण सुरू गर्दछ